I-Aloe Vera Deliplús ethambisa ubisi lomzimba | Amadoda aSitayela
Emhlabeni wezimonyo, konke ngeke kube khona isigaba esiphakeme njenge-Biotherm Homme noma "ama-brand" ajwayelekile njenge-L'Oreal. Kubo bonke abafuna ukuqala ukunakekelwa kwabesilisa (noma ukunakekelwa ngokujwayelekile) ngezindleko eziphansi, nansi inketho: I-Deliplús Aloe Vera ethambisa ubisi lomzimba, noma yini efanayo, ilebula elimhlophe leMercadona.
Umzimba uvame ukuba yindawo yethu ebuthakathaka, asikaze sinikele isikhathi ekunakekeleni kwakho. Siyageza nokunye okuncane. Singachitha imizuzu emihlanu ebusweni, kepha umzimba uhlala esihlalweni esingemuva. Ngalesi sizathu, akukho okungcono kunokhilimu oshibhile kakhulu ongaqala ngawo.
Akuwona ukhilimu okhethekile wabesilisa, kepha hhayi nabesifazane, ngakho-ke singayisebenzisa ngaphandle kwezinkinga. Kamuva equkethe i-Aloe Vera ngaso sonke isikhathi isiqinisekiso se-hydration. Masingalindeli ukuthi izoguqula isikhumba sethu sibe ngesengane, kepha iqinisekisa okungaphezulu kwe-hydration eyamukelekayo. Okubi kakhulu ukuthi kungahle kube ngamafutha amancane, kepha akukho lutho olwenziwe ihaba. Noma kunjalo, ngokungangabazeki inketho enconywe kakhulu.
Kepha kusekhona okungcono kakhulu, intengo. Uma sikuqhathanisa nomkhiqizo ophezulu njenge-moisturizer yomzimba we-Biotherm, kushiya indawo yokungabaza. Izindleko zesithambisi esiphezulu ngama-30,50 euros (250 milliliters), nge-euro eyodwa amashumi amathathu (milliliters angu-400) futhi nangemishini yokuhambisa iMercadona. Umehluko wentengo awunakulungiswa nakude, ngakho-ke manje kukuwe ukuthi uthathe isinqumo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Ukusenga ubisi lomzimba i-Aloe Vera Deliplús
Isiphakamiso esihle kakhulu, Hector. Izimonyo zekhwalithi azisho izimonyo ezibizayo.
Noma kunjalo, i-moisturizer yomzimba ngamafutha omnqumo ingcono kakhulu (okungenani esikhunjeni sami isebenze kahle!)
IZara Homewear Fall-Winter 2010-2011